Eyona midlalo ilungileyo yeDisney ye-Android | I-Androidsis
UPaco L Gutierrez | 06/04/2021 11:00 | Imidlalo ye-Android, Izaziso
I-Disney ibisihamba nathi amashumi eminyaka ngeefilimu zayo ezinopopayi, kodwa ekubeni izixhobo eziphathwayo ziyinxalenye yobomi bethu, zonke ezo bhanyabhanya zihamba nomdlalo wevidiyo. Eyona midlalo ilungileyo ye-Disney princess yayiqhelekile kwii-consoles okanye ii-PC kodwa kule mihla Eyona nto iqhelekileyo kukubabona kwizixhobo eziphathwayo, simahla kodwa benokubakho kwentlawulo ezincinci kwisicelo. Ilungele abantwana abaphantsi kolawulo lwabazali.
Uninzi lwemidlalo yeDisney ijolise kwabancinci, nangona sifumana imidlalo yazo zonke iintlobo, ezinje ngeepuzzle, ubuhlanga, ukuzidela okanye amaqhina.. Yonke imidlalo inokukhutshelwa ngokulula kwi-PlayStore yesiphelo sethu se-Android. Kweli nqaku sikushiya kukhetho lweyona midlalo mihle ye-Disney princess esinokuyifumana kwivenkile kaGoogle.
1 I-Disney Princess Magic Gems
2 Ukuwa kweFree Free
3 Izikumkani zeDisney Magic
4 Izahlulo zeDisney Frozen
5 Iindawo zebali leDisney
I-Disney Princess Magic Gems
Umdlalo wePuzzle owenziwe waphuhliswa yiGameloft apho ubucukubhede bulula kakhulu: silayida ngomnwe wethu ukuhambisa iigugu kunye nokudibanisa ezo zinombala ofanayo ukubenza bathi shwaka ngokuthe ngcembe basombulule iipuzzle. Umdlalo uza kusinika uthotho lwe izincedisi esizakuyifumana ngexesha lomdlalo ezakusinceda ukuba siqhubeke I-combos ukuqhuma iigugu ngokukhawuleza kwaye ngale ndlela ufumane amanqaku angcono.
Umdlalo, njengoko igama lawo libonisa, ubambelele kwiinkosazana ezizodwa kuzo zonke i-sagas ezenziwe yiDisney, phakathi kwazo sifumana uAriel, uJasmine, uBella phakathi kwabanye. Njengoko sidlala kwaye sigqibezela amanqanaba siya kuvula abalinganiswa abaphambili beDisney sagas eyahlukileyo. Siza kuvula nezinye iimeko zokudlala kuzo. Esi sicelo simahla simahla ukukhuphela, kodwa iqulethe intlawulo kwisicelo, esiya kuthi sivumele ukuvula umxholo ngaphandle kokwenza ngelixa udlala.
Ukuwa kweFree Free
Omnye wemidlalo yeDisney enokukhutshelwa kakhulu kwiGoogle PlayStore kwaye kubonakala kufanelekile kuthi xa sijonga umgangatho womdlalo kunye nobushushu bokuba indalo yonke eyenziwe yiDisney ejikeleze iFrozen ikhupha phakathi kwabancinci. Kule mdlalo kuya kufuneka sijoyine uElza, uAnna no-Olaf phakathi kwabanye abalinganiswa ukusombulula iiphazili ezifanayo nezo zeDisney Princess Magic Gems kodwa ngobuhle kunye noseto oluthathwe ngqo kwisaga yeFrozen.
Njengakwangaphambili njengoko sigqiba amanqanaba siya kufumana iingqekembe kunye nembuyekezo ukuvula izincedisi zokuthambisa ukuhombisa kunye nokwenza ngokwakho iplaza yethu eArendelle kunye neevenkile, imithombo, iinqwelo phakathi kwezinye izinto. Ukukhutshelwa kwesicelo simahla kodwa kubandakanya iintlawulo ngaphakathi kwesicelo sokuvula izinto zokuthambisa, ikwabandakanya intengiso edla ngokuba yinto engathandekiyo.
Disney Frozen Fall Fall
Umthuthukisi: Jam City, Inc.
Izikumkani zeDisney Magic
Isihloko sikwaveliswe nguGameloft esisisa kwipaki yeDisney ethi ngenxa yesiqalekiso esivela eMalefica ipaki yonke itshatyalalisiwe. Siza kuba ngabo Kuya kufuneka sikhathalele ukubuyisela ipaki kubuhle bayo bonke ukufezekisa uthotho lwemishini kunye Ukulwa nabahlali be-Disney sagas ezifana ne-Scar kwi-King King okanye i-Gaston evela kwi-Beauty kunye ne-Beast. Kuyindawo eyonwabisayo kakhulu ukuba iindwendwe zibone amaphupha abo ezaliseka.
Ipaki kukho izinto ezingaphezu kwe-100 ezahlukeneyo ezinomtsalane ezikhoyo kunye nangaphezulu kwe-150 yoonobumba abavela kuzo zonke ii-Disney sagas phakathi kwazo Sifumana amakhosazana anjengoBella, Little Mermaid, Frozen, Anna ... Ukukhuphela umdlalo kukhululekile nangona iqulethe iintengiso kunye neentlawulo ezincinci ngaphakathi kwesicelo. Ukongeza, lo mdlalo unendlela yabadlali abaninzi, ke sinokwabelana ngamava nabanye abadlali kwi-intanethi, nokuba yi-WiFi okanye idatha.
I-Disney Magic Kingdoms: Yenza eyakho iPaki yoMlingo
Izahlulo zeDisney Frozen
Sibuyela kumdlalo wephazili weCandy Crush apho abalinganiswa abaphambili ngabo bakwimeko bhanyabhanya eFrozen 2. Isindululo esenziwe yiJam City, Abadali abafanayo beDisney Frozen Free Fall. Kule mdlalo kuya kufuneka sidibanise uthotho lwamatye anqabileyo ukufumana amaqhekeza ekhephu aya kusivumela ukuba sihombise inqaba ngendlela esithanda ngayo. Ngelixa Soyisa amakhulu amanqanaba okudibanisa iigugu Sinokubhalisela iminyhadala ekhethekileyo yokuvula amabhaso kwaye ngenxa yoko sifumane izinto zokuthambisa ezingcono.
Umdlalo uyafumaneka simahla simahla kwiVenkile yokuDlala kodwa ubonelela ngeentlawulo ngaphakathi kwesicelo, ezi ntlawulo zifumaneka kuphela izinto zokuhombisa inqaba ngaphandle kokudlalaUmdlalo ulinganiselwe iminyaka engama-3 + kwaye uthandwa kakhulu kwiVenkile kaGoogle.
I-Disney Frozen Adventures: Umdlalo omtsha we-3
Iindawo zebali leDisney
Siza kumdlalo otshintsha imeko yoluhlu kancinci ukuba asinike enye yezona midlalo zibalaseleyo zeenkosazana zeDisney, kunye necala elinomdla nelibalisayo kunye neepuzzle ezithile. Umdlalo omnandi kakhulu oza kunika iiyure zokuzonwabisa kwabancinci. Umdlalo apho sinakho fakela imibala encwadinikunye nokudibanisa amachaphaza ukuhamba kunye nabalinganiswa abohlukeneyo. Singathatha inxaxheba kumakhulu emidlalo emincinci eya kuthi isinike ukufikelela kwimivuzo. Khuthaza ukufunda ngemisebenzi enjengokusetsha amagama, ukubeka amachaphaza, kunye nezinto ezifihliweyo.
Umdlalo ujolise kakhulu ebantwaneni kwaye unokuba lula kakhulu kwaye uyadika kubantu abadalaUmdlalo ngokubanzi ulula kodwa ngoomatshini abanomdla kakhulu abanika okwahlukileyo kwikhathalogu yomdlalo weDisney. Njengoninzi lweemidlalo, ikhululekile ukuba ikhutshelwe nangona ibonelela ngeentlawulo kwisicelo.
Umthuthukisi: Izitudiyo zeKuato
Njengoko igama layo libonisa, ngumdlalo apho i-Emoji ingabalinganiswa abaphambili, kodwa ezi Emoji zivela kubalinganiswa beDisney, phakathi kwazo zonke amakhosazana kuzo zonke i-sagas. Iphuhliswe ngabafana abavela kwiJam City, ngumdlalo wepuzzle ofana nezinye esinazo kuluhlu, nangona kule meko endaweni yamatye anqabileyo, Kuya kufuneka sidibanise i-emoji. Ukuqhubela phambili kumdlalo kufuneka silandele uthotho lwemishini yokuphumelela kunye nokuqokelela i-Emojis.
Singancokola nayo yonke i-Emoji esiyongeza kwingqokelela yethu kwaye siphucule ibhodi yethu. Inemowudi ekwi-Intanethi ukuze sikwazi ukucela umngeni kubahlobo bethu kwaye siya kuba nemicimbi ekhethekileyo phantse yonke imihla. Umdlalo, njengabo bonke abakuluhlu, ukhululekile ukukhuphela kodwa uthenge ngaphakathi kwesicelo.
Le yimidlalo ye-Disney yenkosazana esiyicebisayo evela kwi-Androidsis, sivulelekile kwiingcebiso zakho kwaye siya konwaba ukuzifunda kumagqabantshintshi. Ukuba unomdla kwimidlalo ye-Android, unokuba nomdla eyona midlalo ilungileyo yokunxiba Esikwenza nazo umphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo ilungileyo yeDisney ye-Android